Malunga nathi - Hebei Huipin Machinery Co., Ltd.
Iimveliso ze-HP kunye neMechine
Iseti epheleleyo yenkampani yemveliso yeoyile, izixhobo zokucoca izinto ezingasetyenziswanga, ukucocwa kwangaphambili, ukucocwa, ukucocwa, ukuzaliswa kunye nemveliso (enje ngobunjineli be-phospholipid, ubunjineli beprotein) ziphuhliswa yinkampani yethu kunye namaziko ophando lwenzululwazi kunye namaziko. Itekhnoloji yemveliso yeoyile eqhubele phambili isebenza kuzo zonke iintlobo zezityalo ezikhulu, eziphakathi nezincinci. Inkampani yethu iyakusekelwa kwiimfuno zabathengi kunye nophuhliso lwexesha elizayo kuyilo lwabathengi kunye noyilo lwefektri, utshintsho lwezityalo ezindala, ukusombulula iingxaki abajamelana nazo abathengi kwimveliso yeoyile.
Siza kwenza izicwangciso kunye neekowuteshini zabathengi ngokweemfuno zabo.
Kwaye iinjineli zethu ziya kuba noxanduva lokukhokela ukufakwa kunye nokugunyaziswa kwezixhobo, kwaye zinoxanduva lokuqeqesha abaqhubi beeworkshop bade baqhube kakuhle.
Inkampani yethu ibambelela kwingcinga yeshishini "lodumo kuqala, isayensi kunye netekhnoloji ekhokelayo", kwaye ngokuthe ngcembe yenza inkcubeko ejolise kwinkonzo. Bambelela kwindawo yokuqala, imigangatho ephezulu, ukubonelela abathengi ngeenkonzo ezisemgangathweni ezenziwe ngabantu.
Umxholo "Huipin": sizinikele kuphuhliso lweenkozo kunye neoyile ngomkhono wethu!
"Huipin" umxholo: igama lokuqala, ukukhokela iteknoloji!
1. Iwaranti yeenyanga ezili-12 ngaphandle kweenxalenye zokunxiba
2. Incwadi eneenkcukacha yomsebenzisi wesiNgesi iya kukhutshwa ngomatshini
3. Iindawo ezaphukileyo zengxaki esemgangathweni (ngaphandle kweenxalenye zokunxiba) ziya kuthunyelwa simahla
Ukuphendula ngokukhawuleza ingxaki yomthengi
Ukuhlaziywa kwemveliso ezintlanu kubhekiswa kubathengi
1.Gcina iiyure ezingama-24 kwi-intanethi ukuphendula imibuzo yomthengi kunye nomyalezo we-Intanethi
2.Ngokweemfuno zabathengi, isikhokelo somthengi sikhetha eyona modeli ifanelekileyo
3.Offer eneenkcukacha umatshini iinkcukacha, imifanekiso kunye nexabiso mveliso engcono
Wamkelekile abathengi ukuba batyelele kwaye bathethathethane ngamashishini!
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Zonke iiMveliso Umatshini wokushicilela ioyile, Umthengisi weoyile, Imithombo yeendaba yeoyile yeOlive, Ingqele Cofa Umatshini weoyile, Imbewu yeNtengiso yeoyile, Umatshini wokushicilela weoyile encinci,